१५ कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासन गर्दै, कुनको कति ? – hamrosandesh.com
१५ कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासन गर्दै, कुनको कति ?
विभिन्न १५ वटा कम्पनीहरूले प्राथमिक शेयर (आईपीओ) केही दिन भित्र जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार १५ वटा कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको लागि अनुमति माग गर्दै बोर्डमा आवेदन दिएका हुन् । १५ वटा कम्पनीले ५ अर्ब ५५ करोड रुपियाँबराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन् ।